आँशू सबैको एउटै हो विकास खर्च कटाएर जनता बचाउन लागेका छौं-नगर प्रमुख पाण्डे – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. आँशू सबैको एउटै हो विकास खर्च कटाएर जनता बचाउन लागेका छौं-नगर प्रमुख पाण्डे – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
दमौली । लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले विकास खर्च कटाएर जनता बचाउने अभियानमा लागेको बताएका छन्। कुराकानीका कर्ममा पाण्डेले बाटोघाटोको पैसा कटाएर महामारी कोभिड नियन्त्रण गर्न बलबुताए भ्याए सम्म लागेको बताए।
महामारीको शारिरिक, मानसिक र आर्थिक रुपमा नगरपालिका साथमा रहेको उनले बताए । ‘आँशू सबैको एउटै हुन्छ’ नगर प्रमुख पाण्डेले भने। विपद्को समयमा नगरपालिका जनताको साथ रहेको बताए। ‘विकास हामीले अर्को वर्ष गर्न सक्छौं यो वर्ष जीवन बचाउन पर्छ पाण्डेले भने, मानिसको जीवन भन्दा ठुलो अरु केही हुँदैन’। निम्न आयस्तर भएका कोभिडबाट संक्रमित विरामीको लागि पाँच हजार देखि २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको उनले जानकारी दिए।धेरै रकम लाग्ने अवस्था भएमा चन्दा संकलन गरेर भएपनि बचाउने उनले बताए।
विरामीलाई हस्पिटल सम्म लाने र घर सम्म ल्याउन निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख पाण्डेको भनाई थियो। नेपाल सरकारले भ्याक्सिन समयमा नै नपठाएकोले कि भ्याक्सिन दिन कित नगरपालिकालाई खरीद गर्न अनुमती दिन पत्रचार गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘जनता बचाउन सबै नागरिकको लागि भ्याक्सिन जरुरी त्यसको लागि नेपाल सरकारसँग तत्काल उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन गर्न पत्रचार गरिएको छ’ पाण्डेले भने।
नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाई मनोबल बढाउनेमा ध्यान केन्द्रीय भएको बताए । कोरोना पाप हैन मनोबल उच्च राखेर पराजित गर्न सकिन्छ घरदैलोमा नै पुगेर विरामीलाई उत्प्रेरणा दिईएको उनले बताए। ‘सकरात्मक सोच, सद्भाव, प्रेम, घरदैलो कार्यक्रमले जनताको मन जित्ने प्रयाश मैले गरेको छु’ नगर प्रमुख पाण्डेले भने। स्वास्थ्य सामग्रीहरु सेनिटाईजर मास्क, वितरण गर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न माइकिङ गर्ने गरिएको उनले बताए।
जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क औषधी व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाई थियो। हामी जनताको साथसाथमा नै छौं नकरात्मक भन्दा सकरात्मक रुपमा सचेत पारेर रोग लुकाएर छिपाएर नबस्न भनिएको बताए।उपचारको सहजताको लागि निजी अस्पतालबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाईएको उनले बताए।
तीन तीन महिनामा जेष्ठ नागरिकलाई पाँच प्रकारका औषधी निशुल्क वितरण गर्दै आएको उनले बताए । कोरोनालाई पराजित गर्न र दुःखीलाई मद्धत गर्न एकताबद्ध तरिकाबाट लाग्न उनले नगरवासीलाई आग्रह गरेका छन् । हुँदा खाने र हुनेखाने गरी दुई थरी जनताको भएको स्मरण गर्दै पाण्डेले हुनेखानेले अप्ठ्रो परेकालाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे। भोक भोकै मर्ने अवस्था आउन नदिन नगरपालिकाको क्षमताले नपुगेको अवस्थामा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने र राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने उनले बताए।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार June 2, 2021 191 Viewed